Nils Westergard wuxuu dumarka dhigaa bartamaha sawiradiisa | Abuurista khadka tooska ah
Haweeneyda ku jirta sawirka Nils Westergard ayaa ku sameysay Yurub sanadkii 2016
Ma jiraan magaalooyin iyo magaalooyin aan sidaa u sii badnayn kama dambeeyaan habdhaqankaas ee "rinjiyeynta" meelaha iyo meelaha ay cawl ahaan magaalooyinku ku badan yihiin goobta marka aan dhex marno. Waa sababtaas tan iyaga ugu beddeleysa koone ama darbi midab ka buuxo ay dad badani ku fahmayaan qoraallada qaab ka duwan.
Nils Westergard waa farshaxan dhinacyo badan leh oo mas'uul ka ahaa rinjiyeynta magaalooyinka iyo magaalooyinka Yurub sanadkii la soo dhaafay oo dhan 2017. Taasi waa sababta uu isagu isagu isugu soo ururiyay dhammaan darbiyada si aan u ogaan karno xagee loo aadaa baahiyahaaga farshaxanimo Iyo inaad sidoo kale awood u yeelan doonto inaad ogaato markaad booqato mid ka mid ah magaalooyinka uu sawiray farshaxankan.
Sidaad u jeeddo, jilaaga ugu weyn ee muraayadaha sawirkiisu waa haweeneyda. Ficil ahaan dhammaan muraayadaha taxanahan Yurub laga soo bilaabo 2016 waxay dumarka ku muujinayaan dareen ama dareen kala duwan. Hab loo keeno haweeneyda dhammaan nuxurkeeda waddooyinka magaalooyinkaas iyo magaalooyinkaas.
Iyagu waa uune seddex darbi oo 19 ah in aan soo bandhigno kuwa uu fulinayo nin, maadaama inta soo hartay ay na horkeenaan dumar kala duwan oo noocyo iyo jinsi kala duwan leh. Shaqada uu ka qabto madowga iyo caddaanka isla markaana si cad uga dhex muuqata wajiyadaha ay milkiilayaasheedu u oggolaadeen gacanta hibada leh ee Westergard inay soo bandhigaan fikradahooda iyo saadaasha farshaxanka
Fanaan aad gaari karto boggaaga taas oo wuxuu muujinayaa qeyb ka mid ah farshaxankiisa iyo faylalkaaga. Tiisa ayaan kaaga tagay Facebook iyo iyada Instagram si aad si dhaw ugula socotid, maadaama ay yihiin labadan shabakadood ee bulshada ee noo ogolaanaya inaan shaqsi ahaan ku dhowaanno, la socoshada socodka fanaaniinta sida Neils Westergard, mid leh hibo weyn oo dhanka sawirada ah
Waanu kaa tagnay wata xaraf kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Haweeneyda ku jirta sawirka Nils Westergard ayaa ku sameysay Yurub sanadkii 2016
10 dhacdo oo farshaxanimo oo xaqiiqda ku jirta qalin
Raaxo si loo horumariyo hal-abuurka